Nagu saabsan | Tiantai Dingtian Baako Co., Ltd.
Tiantai Dingtian Baako Co., Ltd. waa warshad xirfadle ah oo bixisa war-saxaafadeed heer sare ah oo qoyan oo wax lagu duubay iyo qalabka xalka, oo lagu daro adeegsiga naqshadeynta wanaagsan, adeegga mashiinka CNC, wax soo saarka ballaaran iyo adeegga saadka
Waxaa la aasaasay 2014, shirkaddu waxay ku taalaa gobolka Tiantai, gobolka Zhejiang, oo ah goob qaran oo 5A ah oo muuqaal qurxoon leh. Hadda warshadeenu waa in ka badan 6500 mitir murabac ah waxayna leedahay in ka badan 100 shaqaale ah. 6-dii sano ee la soo dhaafay, waxaan marwalba la kulannay baahiyaha macaamiisha waxsoosaar fiican iyo tignoolajiyadda iyo adeegga iibka kadib. Hadda waxaan noqonay shirkado baaxad weyn oo casri ah oo xirfad sare leh oo wax soo saar fiber ah oo sumcad wanaagsan leh.
Shirkadeena waxaa la gudoonsiiyey cinwaanada sharafeed ee loo yaqaan "County Top 10 Entrepreneurial Star" iyo "Top Top Top Small Small and dhexdhexaad-size Enterprises of Science And Technology Growth Of The Province". Waxaan sidoo kale ka gudubnay shahaadada nidaamka ISO9001, shahaadada nidaamka ISO14001 iyo shahaadada FSC.
Lixdii sano ee la soo dhaafay, shirkadeena way sii kordheysay waxayna sameysay nidaam maareyn tayo leh oo qumman, nidaamka amniga iyo nidaamka masuuliyada bulshada. Hadda waxaan haynaa koox khibrad farsamo iyo maamul u leh, kuna qalabaysan wax soo saar iyo qalab tijaabo oo horumarsan.
Waxaan soo saareynaa alaabada fiber-ka sameysan sida taleefannada gacanta, suufka, saxannada adag ee mobilada, routerka, qurxinta iyo baakadaha macaamiisha. Sanadka 2020, waxaan balaarineynaa ganacsigeenna cusub si aan u soo saarno waxsoosaarka fiber-ka laga sameeyay ee midabaysan. Dhammaan alaabooyinkayagu waxay la kulmaan ROHS2.0 iyo Heerarka Bilaashka ah ee Halogen.
Samee oo soo saar wasakhda
Garaac oo isbarbar dhig saxarka
Qaabka embriyaha qoyan
Shahaadada Nidaamka Maareynta Tayada ee ISO9001
Shahaadada nidaamka maareynta deegaanka ee ISO14001
Dheehista Duubista Saxarka Haya, Sanduuqa Baakadaha Cuntada Degdega ah, Dhammaan Noocyada Kala Dheehista Duubista Mashiinka Xannibaadda, Khaanadaha Baako Baako Baako Baako, Sanduuqa Baakadaha Cuntada, Shaybaarka Saxarka Dyed,